Shiinaha aluminium LATTICE PANEL warshad iyo alaableyda | Alucosun
TALLAALKA LATINKA ALUMINUM (A2）
ALANUMUM LATTICE PANEL
Alucosun Latest ® wuxuu soo bandhigayaa jiilka cusub ee iskudhafyada aluminium ee hal abuurka leh halkii caadiga ahayd ee polyetylen ama macdanta laga buuxiyo. Badeecadan cusub ee loogu magac daray aluminium shaashadda shaashadda waxaa soo saaray shirkadda Alucosun oo looga baahan yahay shuruudo adag oo ah xeerarka dib-u-dhigista dabka ee alaabta dhismaha.
Waxaa lagu dhisay 100% qaabdhismeedka aluminium, Alucosun aluminium alwaaxa aluminium waxaa lagu daraa waxqabadka dabka ee aan caadiga ahayn, miisaanka fudud iyo fududeynta sameynta isku-darka waxay ka dhigaysaa Alucosun aluminium shaashadda shaashadda riyada naqshadayaasha.
Qalabka aluminium ee aluminium wuxuu ka kooban yahay udubdhexaadka aluminium ee aan guban karin oo lagu dhejiyay inta udhaxeysa 0.7mm iyo 0.5mm aluminium qaro weyn (darajada dibedda ee AA3003 ama AA5005) ee dusha sare.
EU BS EN 13501-1 Dhaqanka dabka- A2
Soo saarida qiiqa- s1
Dhibcaha shidan - d0
ISTICMAALKA GUUD 3mm, 4MM
MUDHARKA MAQAARKA HOR 0.50MM, 0.60MM, 0.70MM
BADHAN 1220MM, 1250MM, 1500MM, QIIMAYN LOOGU TALAGALAY
DHEER RAAX 1000MM-5000MM
MIISAANKA 3.8KG / M (0.5,0.4 / 4MM); 4.3KG / M (0.7,0.5 / 4MM)
NOOCYADA ALLOY AA3003, AA5005
FAA'IIDOOYINKA SOO SAARKA
● Miisaanka khafiifka ah:
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda aasaasiga ah, Alucosun lattice panel ayaa leh miisaan aad u fudud marka loo eego qalabka dabka caadiga ah ee dabka ka diga oo ka sii fudud marka loo eego qalabka kale ee isla qallafsanaanta. Waxay keydineysaa kharashka gaadiidkaaga iyo kharashka shaqada sidoo kale.
Performance Waxqabadka dabka:
Qaab-dhismeedkani wuxuu xaqiijinayaa guddiga wax-qabad la'aan wuxuuna ka dhigayaa mid lagu kalsoonaan karo oo caan ku ah dhammaan codsiyada wejiga, gaar ahaan USA (NFPA285), Boqortooyada Midowday (heerka BS 476-4) iyo Australia (heerka AS1530.1) halkaasoo ay ka jirto baahi sare. iyo dalbashada ret dib u dhac.
Friendly Deegaanka oo saaxiibtinimo leh:
Xubin ka ahaanshaha dhulkeenna, waxaa innagu saaran mas'uuliyadda ilaalinta dhulkeenna hooyo. Qalabka udubdhexaadka ah ee aluminium ee Alucosun A2 waa 100% dib loo cusbooneysiin karo. Sidoo kale ma jiraan wax wasakheyn ah inta lagu gudajiro soosaarka iyo codsiga.
Qalabka udub-dhexaadka aluminiumku waa shey aan la aqbali karin oo la mid ah labada go'yaal dabool. Isla sheyga ayaa la kulma ballaarin kuleyl yar iyo culeyska foosha. Dhanka kale waxaan leenahay tijaabinta xoogga diirka toddobaad kasta 30 maalmood kadib soo saarista. Qalabkayagu waa lacag la'aan.
Inta badan dhimashada dabka kama dhalaalaan gubasho, laakiin qiiqa neefta, Alucosun A2 core waa aluminium saafi ah oo aan guban karin. Inkasta oo udub-dhexaadka kale ee dab-demiska dhaqameedku yahay qaybo kiimiko ah, haddaba golaheena cusubi aad bay u badbaado badan yihiin oo waa la isku halleyn karaa maaddaama aysan lahayn wax sii-deeyayaal ah markay kululaato.
Qalabka aluminium ee udub-dhexaadka aluminium wuxuu ku habboon yahay in la jaro oo la jeexjeexo oo aan ka yareynin router-yada. Sidaa darteed, waxay badbaadineysaa miisaaniyaddaada iyo waqtigaaga. Waxay qaadataa qaabab badan oo kala duwan oo qaab dhismeedkeedu qumman yahay saameyn kuma yeelaneyso xasilloonideeda ama ﬂ qabashadeeda.
HANTIDA HEERKA IMTIXAANKA XAALAD ama UNIT NATIIJO
Cutubka Miisaanka ASTM D 792 Kg / m² 4.3
Aluminium Front qaro weyn - mm 0.7
Daaqa Caarada EN ISO 2360-2003 .m 32
Qalinkii Qalalan ASTM D3363 HB min 2H
Cadaadiska Saameynta ASTM D2794 kg.cm ＞ 110
Dabacsanaanta Dahaarka ASTM D 4145 T-laab (0-3T) 2T
Daawada Daawada ASTM D 3359 Majiro wax dhejis ah Dhaafay
Haynta Midabka ASTM D 224 Max Rating 5 Cutub 4000 Saacadood kadib Dhaafay
Gloss haynta ASTM D 523 80% kadib 4000 Saacadood Dhaafay
Caabinta nuuradda ASTM D 4214 Max Rating 8 Cutub 4000 Saacadood kadib Dhaafay
U Adkaysiga Biyaha AAMA 2605 100 loogu talagalay 20mins In ka yar 5% 4B
Caabbinta Acid Muriatic AAMA 2605 10 dhibcood oo ah 10% HLC, 15mins Majiraan barar
Cadaadiska Alkali ASTM 1308 10%, 25% NaOH, 1 Saac Isbadal majiro
Iska caabbinta Milixda ASTM B117 Ilaa 4000 Saacadood Isbadal majiro
Heer-kul hooseeya - -40 - 80 Isbadal majiro
Xoog Diirka ASTM D 1781 mm · N / mm 140mm · N / mm (Maqaarka hore) 125mm · N / mm (maqaarka dambe)
Awoodda siligga ASTM E8 Mpa 5mm / min, 69MPa
Tusmada dhimista Culayska Miisaanka leh ISO 717-1: 2013 db 22 (-1, -2)
Dammaanadda caadiga ahi waa 15 - 20 sano waxay kuxirantahay aagga mashaariicda saxda ah. 30 sano oo dammaanad ah ayaa loo heli karaa badeecado tayo sare leh oo dusha sare leh.
Kala doorashooyinka midabbada iyo dhameystirka kala duwan ayaa Alucosun Latest ka dhigaya®xulashada ugu jecel ee baqshadda dhismaha. Kaladuwanaansho kaladuwan, adkeysi nidaamka rinjiga tayada dhamaadka iwm. waxay ka dhigeysaa mid ku habboon codsi kasta oo wax lagu xiro ha ahaato dhisme ganacsi, qaab dhismeed astaan ​​u ah aqoonsi u gaar ah ama summad la aasaasay. Alucosun Latest®waxay bixisaa noocyo kala duwan oo heerar iyo caadooyin dhammaystiran oo ka baxsan xarunta dahaadhka gariiradda ee gudaha. Alucosun Latest® dusha ayuu ku dhammaaday PVDF iyo nidaamka rinjiga NANO ee gudaha habka daahan gariiradda joogtada ah kaas oo hubiya tayada iyo joogtaynta u hoggaansanaanta qeexitaanka AAMA 2605.
PVDF nidaamka rinjiga oo ka kooban 70% cusbi PVDF ayaa caan ku ah caabbinta sare ee shucaaca UV iyo saameynta deegaanka sidaa darteed Alucosun® waa waxqabad waara oo joogto ah xaaladaha cimilada daran.
NANA-PVDFwaa nidaam rinji is-nadiifin ah. Nidaamka Rinjiga noocan oo kale ah wuxuu bixiyaa jaakad sare oo cad oo dheeri ah oo leh waxyaabo aad u sarreeya oo iskutallaab ku leh NANO oo ku saabsan PVDF Finish; kaas oo hubiya dusha sare ee siman. Dusha sare oo siman oo nadiif ah ayaa ka dhigaya wasakh iyo boodh isku dhafan taas oo siinaysa dhismaha marwalba muuqaal nadiif ah. Nidaamyada rinjiga ee PVDF iyo NANO waa kuwo aad u adkeysanaya 15-20 sano oo dammaanad qaad ah.
LAGA SAMEEYAY alwaaxyo leh fursado kala duwan oo FInish ah ayaa laga heli karaa Alucosun®si kastaba ha noqotee waxay ku xiran tahay waqti cayiman iyo xaddidaadaha cabbirka. Si dabiici ah loo ilaaliyo alwaaxyada lakabka anodized waa xoqan xoqan oo aad u adkeysi badan waxay bixisaa dammaanad ku saabsan 30 Sanado.
PE iyo HDPErinjiga ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa codsiyo badan iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta ballaaran ee midabada iyo tixgelinta dhaqaalaha, hadda sannadaha dammaanadda waxaa lagu kordhin karaa 5 sano illaa 8 sano oo leh noocyo kala duwan oo daahan ah. Dhammaadka HDPE ayaa sidoo kale loo heli karaa sidii nidaamka rinjiga caadada ah.
Marka aluminium aluminium uu ka hooseeyo dhismaha laabtiisa, waa inuu ku jeexjeexaa qaybta laab laab oo wuxuu furi karaa V-jeexitaanka iyo U-jeexitaanka, iwm. Waxay adeegsan doontaa mashiinno dhejis ah oo gaar ah oo loogu talagalay aluminium aluminium si loo hubiyo in qoto dheerida jeexitaanku aysan waxyeello u geysan qalabka aluminium ee ka soo horjeeda waana in loo daayaa dhumucdiisuna tahay 0.8 mm. Waxay qaadan kartaa tallaabooyin lagu xoojinayo feeraha soohdinta, iwm sida looga baahan yahay qaybta jeexitaanka.
Hore: QALABKA ALUMINUM PANEL (SAXIIX)
Xiga: QALABKA QALABKA ALUMINUM